Rehefa niainga teto Antananarivo hihazo an'i Toliara ilay fiaramanidina 5R-ASB nitondra ilay volamena 73.7kg ny 31 desambra 2020 tamin'ny 05:17 maraina, dia nanova izany sidina anatiny izany ho sidina iraisam-pirenena tao Toliara, rehefa nilaza fa hanampy solika tao an-toerana.
Ary dia nizotra nivoaka ny faritry Madagasikara tamin'ny faritra tsy hitan'ny radar satria toerana tsy rakotry ny balise Malagasy izay ao Antananarivo sy Antsiranana ihany no misy azy, fa ny fifandraisana kosa dia mipetraka hatrany eo amin'ny fiaramanidina sy ny Contrôleur eo amin'io faritra io.
Tamin'ny 09:57 (Ora any an-toerana) dia nigadona teo amin'ny seranam-piramanidina lehibe Aéroport international OR Tambo ao Johanesburg, Afrika atsimo ny fiaramanidina.
Nizotra tamin'ny parking tsy voarakitra ao amin'ny carte ity fiaramanidina, ny fiaramanidina rehetra amanjatony mifanerasera eo amin'ny seranana anefa dia tsy maintsy mandeha eny amin'ny parking ara-dalàna, ary voarara ny mandeha eny amin'ny hangar raha tsy mahazo alalana manokana.
Voarakitra amin'ny sary miloko manga ny parking ara-dalàna ao Johannesburg, izay carte ampiasain'ny mpanamory migadona ao, ary ny faritra mena dia faritra voarara, izay nandehan'ity fiaramanidina 5R-ASB nitondra ilay volamena 73.7kg ity.
Raha jerena ny toerana dia hangar takotakona.
Niala teo amin'ny hangar ny fiaramanidina tamin'ny 11h30 (Ora any an-toerana) ary nigadona teo Ivato Antananarivo (TNR) tamin'ny 17h15 (Ora Madagasikara).
Azo antoka fa nanao solika tao Johannesbourg izany ity fiaramanidina ity, izany hoe sidina ara-dalàna matoa nahazo solika, ary afaka niverina niainga indray. Nahazo alalana manokana tao Johannesbug izany ity fiaramanidina ity hiantsona eny amin'ny parking tsy azo aleha, izay misy hangar takotakona.
Mipetraka izany ny fanontaniana, iza no nanome alalana ity fiaramanidina ity tany Johannesburg, tsy maintsy nanao fangatahana mialoha anefa ny fiaramanidina hampiasa izany parking izany, midika fa nisy fangatahana ara-dalàna niainga avy aty Madagasikara.
Raha ny fijery ilay parking, dia hivelan'ny fampidinana mpandeha andalo ny douane transit, ka nisy fiaramanidina hafa ve niandry hampitaina ireto mpandeha mitondra ilay volamena, satria azo antoka fa raha hiverina hanao enregistrement bagage hiondrana any Dubai dia ho raisim-potsiny.
Eto dia tsy mbola nisy fampitam-baovao fantatra hoe taiza no nahatratrarana azy telo lahy, ny azo antoka aloha dia ny fiaramanidina tafaverina eto Madagasikara, fa tsy voageja any an-toerana, ka efa lasa ve ny fiaramanidina vao tratra izy telo lahy dia tara ny fangejana ny mpanamory sy ny fiaramanidina, fa ny mahavariana dia hatreto ny fiaramanidina dia mbola afaka mandeha hatrany, nefa raha taxi-brousse tratra nitondra toaka gasy na paraky gasy fotsiny dia efa voageja ny mpamily, ny mpanampy azy, ary fourrière ny fiara, ary sahirana hatramin'ny tompon'ny fiara.
Efa eny Tsiafahy moa ny mpanamory roa lahy sy ireo mpiasa ao amin'ny STA, sy ny sekretera Jeneralin'ny ACM ary ireo roalahy mpandeha tsy nanainga, fa hatreto mbola tsy misy resaka ny Douane, PAF, tsy mbola fantatra ny tompon'ny volamena, ny any Toliara tsy misy resaka, fa ireo trondro pirina ihany aloha no midoboka.
Nisy ihany koa fanadiadiana ny fifandraisana an-téléphone teo amin'ny Présidence, minisitra iray, ary ny ACM ny 31 desambra 2020, fa voalaza fa tsy misy fifandraisana tamin'ity trafika volamena ity ny resaka nifanaovana fa fandaminana ny salon fandraisana olona maventy teny Ivato.
Raha ny fanadiadana dia betsaka ihany koa ny téléphone nifanaova'ny pilote sy io minisitra io alohan'ny hiaingany, ka dia andrasana ihany koa izany ny fanazavana momba izay.
Nisy moa ny fihaonan'ny minisitra malagasy momba ny raharaham-bahiny sy ny Ambasadoro n'ny Afrika Atsimo eto amintsika nifandinihina ny amin'ny famerenena ny volamena eto an-tanindrazana, sy ny famerenena an'izy telo lahy mpitondra entana ho tsaraina eto an-toerana.
Fantatra ihany koa fa amin'ny 12 janoary izao izy telo lahy ireo no hiakatra fitsarana any Afrika atsimo.